admin | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 988
> ကဗဵာဆရာုကီး ဦးတင်မိုး ကယ်ြလနြ်ူခင်း ၁ိံစြ်ူပည့် အင်းစိန်နေအိမ်တငြ် ကဵင်းပမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဇန်န၀ၝရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ိုံင်ငံတကာက ဆရာ ဦးတင်မိုး၏ မိသားစုမဵား၊ူမန်မာစာပေခဵစ်သူ အသိုင်းအ၀ိုင်းမဵားက ကယ်ြလနြ်ူခင်း...
> ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်း – ၂ဇာဂနာဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ အချိန်။ ။ ၁၉၃၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ တနင်္လာနေ့ ညနေ ၃ နာရီ နေရာ။ ။ တက္ကသိုလ်...
>ူပည်ပသတင်းစာမဵားထဲကူမန်မာသတင်းတိုထြာ – 24th Jan 2008
>ူပည်ပသတင်းစာမဵားထဲကူမန်မာသတင်းတိုထြာမိုးမခဇန်န၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ဆော်ဒီအာရေဗဵတငြ်ူမန်မာ ၃ ဦး သေဒဏ်ခဵခံရ – ရိုက်တာသတင်ူးမန်မာူပည်တငြ် ကလေး ၄၀၀ နေႚစဉ် သေဆုံးနေေုကာင်း ကုလကလေးသူုငယ်မဵားရန်ပုံငေကြ ဆို...
> ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို ဘယ်သူ ဖျက်နေတာလဲ သကျပုတ္တိယ (မန္တလေး) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်ရဲ့ စက်တင်ဘာ သံဃာ့အရေးအခင်းမှာ သံဃာငယ်တွေက တာဝန်ကျေ တယ်။ သံဃာကြီးတွေက တာဝန်မကျေဘူးဘုရားဟု မိမိနှင့်ရင်းနှီးသူ ဒကာတယောက်က...
> ကဗဵာဆရာ စောဝေ ရဲႚ “အာဏာရူုးကီး မြုးကီး သန်းရြေ”အတကြ် ကဗဵာအခဵစ်ဂဵာနယ်တငြ် ဖော်ူပထားမိုးမခဇန်န၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No...
>ဥာဏ်ဦးမောင် –ေုကကြဲ ကြဲေုက
>ေုကကြဲ ကြဲေုကဥာဏ်ဦးမောင်ဇန်န၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ဇိံဍ္ဍ၀ၝရီလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၀၈ူပည်သူခဵစ်တဲ့ ကဗဵာဆရာဋ္ဌကီး ဦးတင်မိုး ကယ်ြလန်ြခဲ့တာ တစ်ိံစြ်ူပည့်ခဲ့္ဘပီ။ ရေကလငြ့်သြာုးကတဲ့ ခဵစ်ခင်သူတေနြဲႛ ဆက်စပ်တိုင်း မိုးမိုး(အင်းလဵား) ကယ်ြလန်ြစဉ်က...
> ဆရာ ဦးတင်မိုး ကယ်ြလနြ်ူခင်း ၁ိံစြ်ူပည့်၊ အမတ်ြတရ လမြ်းဆတြ်ူခင်း ဓာတ်ပုံမဵား မိုးမခဇန်န၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ မောင်စမြ်းရည်၊ ၀င်းဖေ၊ တင်မိုး နဲႚ မာမာအေး – အတူတကြ...
> ဦးတင်မိုး ကယ်ြလနြ်ူခင်း ၁ိံစြ်ူပည့် ဖိုႚ၀န်းကူမန်မာမဵား အမတ်ြတရ ပိုႚစ်စကဒ်ူဖန်ႚခဵိမိုးမခ (ဒီအိုင်ဒီ ဖိုႚ၀ိန်းဘလော့ နဲႛ ပန်းခဵီကိုမဵြိး မတြဆင့်)ဇန်န၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ No tags...
>ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ – 22nd Jan 2008
> မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီဇန်န၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ သတင်းတိုထြာ၊ သီခဵင်းပဒေသာဖုတ်သငြ်းရထား –ူပည်လဖြေိုံင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့မမြဵား စုစည်းခဵက်ေုကကြဲဖယ်ြရာ သတင်းမဵား စုစည်းခဵက်မိုးမခရဲႚ သတင်းထိုထြာူပည်ူမန်မာကဗဵာဆရာ တင်မိုး သိုႚ...
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစမဵား – ရေေူမ့ရင်ြနဲႛ လယ်သမား၊ ကဵနော်မဵြိးတောူ့ဖင့် မပေဵာ်ိုိံင်ပၝူပီ အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်း ဇန်န၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ကဵနော်မဵြိးတောူ့ဖင့် မပေဵာ်ိုိံင်ပၝူပီ စီးပြားရေးလုပ်ငန်းရင်ြဋ္ဌကီး ဦးတေဇတစ်ယောက် ရန်ကုန်မြာရိတြဲ့ အနောက်ိုိံင်ငံသံရုံးတကာကို လညြ့်ပတ်သြားနေပၝသတဲ့။...
> ကဗဵာဆရာုကီး ဦးတင်မိုး ကယ်ြလနြ်ူခင်း ၁ိံစြ်ူပည့် ဆမြ်းကေဋ္ဋးမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇန်န၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ လနြ့်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇၊ ဇန်န၀ၝရီ ၂၂ ရက်နေႚက အမေရိကန်ိုံင်ငံ၊ လော့စ်အိန်ဂဵလိစ်ူမြိႚမြာ ကယ်ြလန်ြခဲ့တဲ့...
>ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ – 20th Jan 2008
>ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာမိုးမခ (ရန်ကုန်)ဇန်န၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်သူ ဂဵာနယ်လစ်မဵား သတိထားဂဋ္ဋန်အက်ရြ် ဘရီနိဒၝန်း စာအုပ်ထကြ် မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်သူ ဂဵာနယ်လစ်မဵား သတိထာူးမန်မာူပည်တငြ်းဂဵာနယ်လစ်မဵား အတငြ်းမြာ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံူးပြ သူမဵားကို စစ်အစိုးရက...
>မာမာအေး – တိံစ်ြအုကာူပန်လာပၝ
> တိံစ်ြအုကာူပန်လာပၝမာမာအေးဇန်န၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ မောင်ဋ္ဌကီး ထိုင်တတ်ဒိုးနတ်ဆိုင်လေူးဖတ်တိုင်း ငေးရလ မြိံစ်ြလည် လမြ်းတာရညြ်။ ကဗဵာက၀ိသူရြိခဲ့လ္တွင်စက်တင်ဘာကသြေးေူမကဵတဲ့ဗုဒ္ဌသားတေမြေတ္ဇာဝေစဉ်စုတေေုကာင်ူးပထြောင်းထု ပစ်ခတ်သေနတ် တုတ်သိုင်းလူရိုင်း ဗာလမိုက်ုကေူပာင်ေူပာင်အပုပ်ကောင်ကိုကလောင်စမြ်းတတ်တဇတ်ြဇတြ်ိံငြ့်အူပတ်ရေးမြာ သိနေပၝတယ်။ အစ်ကိုရာ...
> ထိုင်ိးုိံင်ငံတငြ်ူမန်မာပန်းခဵီဆရာတစ်ဦး၏ တစ်ကိုယ်တော်ူပပြဲူပလြုပ်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ဇန်န၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ပန်းခဵီဆရာ တင်မောင်ဦး၏ တစ်ကိုယ်တော်ူပပဲကြို ထိုင်ိးုိံင်ငံ၊ ခဵင်းမိုင်ူမြိႛတငြ် ယနေႛ စတင်ဖငြ့်လစ်ြခဲ့သည်။ တစ်လုကာူပသမည့် ယခုပပဲကြို ခဵင်းမိုင်ူမြိႛ၊ူမန်မာပန်းခဵီူပခန်ူးဖစ်သည့် သုဝဏ္ဆဘူမိတငြ်...
> ဂဵပန်ရောက်ူမန်မာမဵား အနာဂတ်အတကြ် ဆြေးြေိံးမည်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၇ဇန်န၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ူမန်မာ့အရေးလပ်ြရြားသူမဵား၏ဆြေးြေိံးပဲတြစ်ခုကို ဂဵပန်ိုံင်ငံတငြ်ူပလြုပ်တော့မည်ူဖစ်သည်။ ဂဵပန်ိုိံင်ငံရောက်ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလုပ်ကိုင်နေသူမဵာိးံငြ့် အမေရိကန်အေူခစိုက် US Campaign for Burmaအဖြဲႛ၏ ညနြ်ုကားရေးမြး...
>ဥဒေၝင်း – ကိုးကယ်ြယုံကည်မအြသစ်
> ကိုးကယ်ြယုံကည်မအြသစ် ဥဒေၝင်းဇန်န၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ သံဃာထု၏ ဦးဆောင်မြူဖင့် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာအရေးအခင်ူးဖစ်ပေၞခဲ့သည်။ သံဃာထိုံငြ့် လူထုအပေၞ ရက်စက်စြိာိံပ်ကပ်ြမမြဵားနောက် စစ်အစိုးရဘက်က လိုက်လေဵာမအြခဵြိႚူပလြာသူဖင့်ူပည်သူမဵားမြာ မ္တွော်လင့်ခဵက်...
>ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာမိုးမခ (ရန်ကုန်)ဇန်န၀ၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ၀န်ုကီးခဵပ်ြနဲႚ ဘရိူိုံင်းကို ပၝသြားတဲ့ ကိုတေဇ ၀န်ုကီးခဵပြ် ဗိုလ်ခဵပြ်ုကီး သန်းစိန် ဇန်န၀ၝရီလ ၁၅ ရက်နေႚက ဘရိူိုံင်ိးိုံင်ငံကို သြားရောက်ရာမြာ ဗိုလ်ခဵပ်ြမြုးကီး...
>ပန်းခဵီ ထိန်လင်း – ရေဝြၝရောင် တော်လန်ြရေး ပုံရိပ်မဵား
> (ပန်းခဵီ ထိန်လင်း – ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေး) မိုးမခ ရဲႚ ကာတနြ်းဘောက်စ် က္ပကို ပန်းခဵီခန်းနဲႚပၝ တိုးခဵဲႚမည်မိုးမခဇန်န၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ အစက ကာတနြ်းဘောက်စ် (Cartoon Box) ဆိုတာက ရန်ကုန်တက္ကသိုယ်က...
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစမဵား – ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးလေး၊ ရေမြိသားစုစာရင်း၊ ဘယ်သူအဋ္ဌကီးဆုံးလဲ အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်းဇန်န၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးလေး ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးဋ္ဌကီးရဲႛေူမးတော်လေး ပညာသင်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကေဵာင်းမြာ အထူးအဆန်းတြေူဖစ်နေေုကာင်ူးပည်ပသတင်းဌာနတေကြ ဆိုပၝတယ်။ သီးသန်ႛစာသင်ခန်း၊...
Page 988 of 1,002«1...986987988989990...1002»